Were uru nke Pikolinos ahịa, tinye ego na nkasi obi | Bezzia
Were uru nke Pikolinos ahịa, tinye ego na nkasi obi
Maria onyekwere | 12/01/2022 18:00 | Akpụkpọ ụkwụ
Ahịa bụ nnukwu ohere zụta akpụkpọ ụkwụ dị mma. Ha bụ n'ezie a ohere magburu onwe ya iji nweta akụkọ ndị ahụ niile na ọnụahịa mbụ ha gbanarị n'akpa anyị. Na a bịa n'ihe gbasara ejiji, uwe elu na akpụkpọ ụkwụ na-ejikarị ebe ndị ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji kwenye na ị ga-achọ ịchọta ahịa Pikolinos.
Pikolinos bụ ụlọ ọrụ Spanish nke na-etinye aka na eziokwu, ịdị mma na nkasi obi. Ụlọ ọrụ siri ike nke anyị ji n'aka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gị niile ga-ama na nke na-enye ugbu a ihe ruru 30% ego na nchịkọta ya. Mbelata ị ga-eburu n'uche nyere ịdị mma na ịdịte aka nke akpụkpọ ụkwụ gị.
E wezụga nkasi obi na ịdịte aka ha, ndị anyị bi n'ebe ugwu nke peninsula na-amata akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ha dị ka ihe ngwọta dị mma maka. lụso oyi na mmiri ozuzo ọgụ. Na mba, ọ bụghị mgbasa ozi, nke ahụ bụ ahụmahụ anyị. Ọ bụ ya mere anyị ji kwenye na ọ dị mma ịkọrọ gị ụfọdụ n'ime atụmatụ ha kacha atọ ụtọ.
1 Akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ
2 Flat na akpụkpọ ụkwụ egwuregwu
Akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ
na ọkara okirikiri akpụkpọ ụkwụ ụkwụ, Ejiri akpụkpọ anụ mee, ha na-aghọ ezigbo enyi maka ụbọchị kwa ụbọchị n'oge oyi. Iji gaa n'ụlọ ọrụ, ịpụ maka ihe ọṅụṅụ ... na Vícar ụdị na na-agbanwe n'akụkụ na Aspe na lace-elu ukpụhọde na zip n'akụkụ, ị ga-ahụ ha n'anya! Otu akụkụ ime ya na-akpụzi nke ọma na silhouette nke ụkwụ ya na naanị ya na-adịghị amị amị na-enye njide zuru oke nke ịchọrọ ịga ije n'enweghị nsogbu.
Ụdị ndị a kpọtụrụ aha ha nwere mbelata nke 30% Dị ka ihe nlereanya Pompeya, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị elu zuru oke maka ọdịdị gị kachasị mma nke ga-eju gị anya na nkasi obi ya. Kedu ihe 30% pụtara na akpụkpọ ụkwụ ndị a? Na ọnụ ahịa ya na-agbada site na € 120-140 ruo € 80-97.
Flat na akpụkpọ ụkwụ egwuregwu
Ọ bụrụ na-amasị gị ibu ụzọ gị nkasi obi na nzọ na a akpụkpọ ụkwụ egwuregwu Kwa ụbọchị, ị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ na ahịa Pikolinos iji megharịa akpụkpọ ụkwụ gị. Site na ahịrị ọkụ na nke na-agbanwe agbanwe, ụgbọ ala egwuregwu Cantabria ma ọ bụ Sella na-aghọ ezigbo nhọrọ. Ha abụọ nwere naanị ultralight chunky dị mma maka ịgagharị obodo.
I nwekwara ike nzọ na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ dị mma kwa ụbọchị, mara mma na vasatail. Na nwa, camel ma ọ bụ burgundy na ákwà mgbochi ga-enyere gị aka ime ka ha gbanwee ụkwụ gị ihe niile ị chọrọ, ị gaghị ewepụ ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Akpụkpọ ụkwụ » Were uru nke Pikolinos ahịa, tinye ego na nkasi obi
Nwa m nwanyị chọrọ iyi etemeete, ọ dị oke n'oge?
Ihe anụ ụlọ gị na-achọpụta tupu ị mara ya